မွေ့ယာ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, အသစ်စပ်စပ်မွေ့ယာပေါ်လာသည်, မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်များနှင့် innerspring မွေ့ယာနှစ်ခုလုံးပိုင်ဆိုင်ရန်မျှော်လင့်သောသူတို့အဘို့ option တစ်ခုအဖြစ်ယိနေသည်. အမှန်ကတော့ hybrid မွေ့ရာသည်အလွန်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆအမြှုပ်များဖြင့်တင်ဆောင်ထားသည့်အတွင်းခံပင်ဖြစ်သည်. Hybrid သည်နွေ ဦး ရာသီ၏ပံ့ပိုးမှုရောနှောပေါင်းသင်းမှုကိုခံစားလို။ မှတ်ဥာဏ်မြှုပ်ထားသည့်အရည်အသွေးကိုလိုလားသူများအတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.
နွေ ဦး နှင့်မှတ်ဉာဏ်မြှုပ်စပ်စပ်မွေ့ယာ
စျေးကွက်တွင်မွေ့ယာအမျိုးမျိုးရှိသည်, ရေမြှုပ်, နွေ ဦး, စပ်မွေ့ရာ. သို့သော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာအသစ်များထွက်ပေါ်လာသည်, သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုမည်သူဖြည့်ဆည်းပေးသည်ကိုသင်မည်သို့သိသနည်း, ပျော့လို, မြဲမြံ, သို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်, စမတ်ဖုန်းကိုသုံးနိုင်သည်? ရွေးချယ်စရာမြောက်မြားစွာကသင့်ကိုစိတ်ရှုပ်စေနိုင်သည်. သို့သော်, ဒီအကြံဥာဏ်တွေကိုသင်တကယ်ဂရုစိုက်တာကဘာလဲ: အဲဒါကပိုကောင်းအောင်အိပ်ဖို့ကူညီပေးတာလား? စကားလုံးတစ်လုံးထဲမှာ, စျေးကွက်ထဲမှမွေ့ရာများကိုအမှန်တကယ်အားနွေ ဦး အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်, ရေမြှုပ်, နှင့်စပ်. ဤမွေ့ယာအမျိုးအစားတစ်ခုစီသည်သင်၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးသင်နောက်ထပ်ကြီးမားသော ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီသင်သတိပြုသင့်သည်.
နွေ ဦး မွေ့ရာသည်သင်၏မိဘများသုံးနိုင်သည့်အစဉ်အလာအရှိဆုံးမွေ့ရာဖြစ်သည်. မျိုးစုံအမျိုးအစားများနှင့်မြှုပ်မွေ့ယာ, သူတို့အားလုံးသည်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုမြင့်မားစေရန်လုပ်ဆောင်ကြသည်, သာလွန်သောထောက်ခံမှုပေး, နှင့်အိပ်ချိန်အတွင်းအများဆုံးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့. မွေ့ယာ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, အသစ်စပ်စပ်မွေ့ယာပေါ်လာသည်, မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်များနှင့် innerspring မွေ့ယာနှစ်ခုလုံးပိုင်ဆိုင်ရန်မျှော်လင့်သောသူတို့အဘို့ option တစ်ခုအဖြစ်ယိနေသည်. အမှန်ကတော့ hybrid မွေ့ရာသည်အလွန်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆအမြှုပ်များဖြင့်တင်ဆောင်ထားသည့်အတွင်းခံပင်ဖြစ်သည်. Hybrid သည်နွေ ဦး ရာသီ၏ပံ့ပိုးမှုရောနှောပေါင်းသင်းမှုကိုခံစားလို။ မှတ်ဥာဏ်မြှုပ်ထားသည့်အရည်အသွေးကိုလိုလားသူများအတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.
နွေ ဦး နှင့်မှတ်ဉာဏ်မြှုပ် hybric မွေ့ရာ 2.5cm အေးမြသောဂျယ်လ်မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်, အအေးအချက်၏ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်နိမ့်အပူချိန်. .02.0mm 18cm ထိတ်လန့်နိုင်သောအိတ်ဆောင်နွေ ဦး သည်ငြိမ်သက်နေသောအိပ်စက်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်. မွေ့ရာ box ခေါင်းအုံးထိပ်နှင့်ဖက်ရှင်ဆနျ့ကငျြဘအရောင်ပိုက်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ.
ပစ္စည်း: နွေ ဦး; အထည်; Memory ရေမြှုပ်
ထုတ်ကုန်အမည်: နွေ ဦး နှင့်မှတ်ဉာဏ်မြှုပ်စပ်စပ်မွေ့ယာ
function ကို: အိပ်ခန်းမွေ့ရာ; စပ်မွေ့ရာ
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): လူပျို; ပြည့်သည်; ဘုရင်မ; ဘုရင်; စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား